Global Voices teny Malagasy » Rosia: Tetikady miaramila vaovao sy ny fiarovam-baovao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Febroary 2010 15:40 GMT 1	 · Mpanoratra Gregory Asmolov Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Rosia, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Teknolojia, Akon'ny RuNet
Namoaka ny tetikady (doctrine) miaramila vaovao [RUS] (hitanao ato  ny dika amin'ny teny anglisy) hampiharina mandritra ny folo taona indray i Rosia tamin'ity volana febroary ity. Na dia tsy misy filazana mivantana ny resaka fiarovana an-tserasera na resaka aterineto mivantana aza io dosie io, dia miresaka momba ny endrika fifampitam-baovao ao anaty resaka fiarovam(-pirenena), izany hoe raha faritana, dia mampiditra resaka aterineto, ny HAJ (haino aman-jery) ary ny fiarovana an-tserasera.
Nivoaka voalohany indrindra folo taona lasa izay ny dosie tsy mbola voampirina momba ny fiarovam-baovao dia ny tetikady (doctrine) izany. Mampahafantatra antsika ny anjara toeran'ny vaovao avy amin'ny fijery anaty fiarovam-(pirenena) ity dosie amin'izao fotoana izao ity. Mety azo ampiharina amin'ny adihevitra momba ny fiarovana an-tserasera sy ny aterineto tsara, ary ireo sehatra fifampitam-baovao samihafa (ohatra: ny HAJ be mpanaraka sy be mpamaky).
Hahitana ireo andininy mifandraika fiarovam-baovao ao amin'ny fampianarana (na tetikady na foto-pisainana na doctrine araka ny soratako mahazatra eto ihany) ny miaramila rosiana ity dikan-dahatsoratra ity. Hanadihady ihany koa anefa ilay fampianarana raha tarafina amin'ny adihevitra momba ny fiarovana an-tserasera sy ny aterineto.
4. Azo itarafana ny fandraisana anjaran'i Rosia eo amin'ny lafiny politika, diplomatika, lalàna, toe-karena, tontolo iainana, famoaham-baovao, ara-miaramila ary ny fitaovana hafa ho enti-miaro ny tombotsoan'i Rosia sy ny tombotsoan'ny mpiara-dia aminy ny foto-pisainana (doctrine).
Manaiky ny fikasana anatin'i Rosia amin'ny fepetra raisiny eo amin'ny sehatry ny famoahana na fanangonam-baovao hiarovana ny tombotsoan'ny fireneny sy ireo mpiara-dia aminy io andininy fahaefatra io.
Mamaritra ny loza tahaka izao kosa indray ny andininy fahasivy amin'ilay dosie, “Ireo loza miaramila mitatao ao anatiny” (Основные внутренние военные опасности):
b) Ny fanelingelenana ny asan'ny fahefam-panjakana, na ny fitondrana foibe, ny fampitaovana ny miaramila ary ny fitaovam-pifandraisan'ny Rosia.
Ny andininy faha-12 dia manonona ireo endrika adi-miaramila maoderina(Характерные черты современных военных конфликтов):
a) fampidirana sy hery miaramila sy ny mety ho vitan'ny tsy miaramila
g) Fanamafisana ny andraikitry ny fampitahana na fampiadiam-baovao
Mamelabelatra ny endriky ny adim-baovao ny andininy faha-13 amin'ny tetikady. Mamaritra ny toetran'ny ady maoderina izy io (Особенности современных военных конфликтов)
g) Famoahana haingana ny adim-baovao hahatratrarana ny tanjona politika tsy mila ny fidiran'ny hery miaramila an-tsehatra, ary avy eo – dia manao izay hahatonga ny fiarahamonina iraisam-pirenena hampiasa ny hery miaramila.
Mametraka ny lisitry ny tanjon'ny Federasionan'i Rosia eo amin'ny fandresendahatra sy fisorohana ny ady miaramila ny andininy faha-19 (Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов). Ny tanjona voalohany moa araka ny dosie dia:
a) fanombanana sy faminavinana mialoha ny fivoarana politika sy ara-miaramila manerantany sy isam-paritra, ary eo ihany koa ny toetry ny fifandraisana eo amin'ny tontolon'ny miaramila sy politika amin'ny fampiasna teknolojia maoderina sy ny teknolojian'ny famoahana sy ny fanangonam-baovao.
Mamarina ny laharam-pahamehana eo amin'ny rafitra ara-miaramila ny andininy faha-30 (Основные задачи развития военной организации):
k) fanatsarana ny fitantanana ny rafi-panangonana sy famoaham-baovao hiarovana ny tafika sy ny vondro-tafika hafa.
Manome ny andraikitra amin'ny fampitaovana ara-miaramila sy fitaovana manokana ho an'ny tafika sy ny vondro-tafika hafa ny andininy faha-41 (Задачи оснащения Вооруженных Сил и других войск вооружением, военной и специальной техникой):
b) Fampivelarana ny hery sy ny fomban'ny fampiadiam-baovao (na fampitaham-baovao).
g) Fanatsarana ny fifanakalozam-baovao amin'ny alalan'ny fampiasana teknolojia maoderina sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, ary koa ny sehatra ifanakalozam-baovao manokana eo amin'ny tafika sy ny vondro-tafika hafa ho ao anatin'ny tontolom-baovaon'i Rosia
Manasongadina ny maha-zava-dehibe ny tolona amin'ny famoahana sy fanangonam-baovao ao anatin'ny ady maoderina ity tetikady ity (mety hifandraika amin'ny fiarovana an-tserasera sy izay endri-baovao hafa izany)
Mampanakaiky ny adim-baovao miaraka amin'ny fiantraikany eo amin'ny hevitry ny olona ankapobeny sy ny anjara toeran'ny fihevitry ny olona eo amin'ny fahafahana mitondra ny fidirana an-tsehatry ny miaramila ny Tetikady. Vokatr'izany dia azo jerena ho ao anatin'ny tetikady fampanaovana fanafihana ny miaramila sy dingana voalohany amin'ny fidiran'ny miaramila an-tsehatra (hanao operation) ny fiantrikany eo amin'ny fihevitry ny ankapoben'olona.
Mametraka tanjona hampivelarana ny herin'ny adim-baovao ka tafiditra amin'izany ny fahafaha-manafika ny tetikady (ny tatitra nataon'ny McAfee  vao haingana moa dia mametraka an'i Rosia ho iray amin'ny firenena afa-manao fanafihana an-tserasera manampy isa an'i Etazonia, Shina, Frantsa ary i Isiraely)
Faritan'ny tetikady ho ao anatin'ny tanjona haha-maoderina ny hery miaramila ny (fampidirana azy ho) ao anatin'ny sehatra fanangonana sy fandraisam-baovao any Rosia.
Iray amin'ny teboka lehibe tsara homarihina ny fahabangan'ny famaritana ny singa mandrafitra ny adim-baovao. Vokatr'izany dia lasa tafiditra ao anatin'ny valan'ny fiarovam-baovao eo amin'ny fomba fijery miaramila ny fiarovan-tserasera sy ny aterineto (tafiditra amin'izany ny asa miankina amin'ny aterineto rehetra).
Ao anatin'ny fahazarana Rosiana moa izany famaritana malalaka dia malalaka ny fiarovam-baovao izany. Aoka aloha homarihina fa tokony hojerena amin'ny hoe samy hafa ny fomba fijery misy eo amin'ny Rosiana sy ny tandrefana amin'ity tetikady lazaina eto ity. Ny fomba fijerin'i Etazonia sy ny tandrefana rehefa miresaka fiarovan-tserasera dia mirona kokoa amin'ny fametrahana ny lalàna ny atao hoe heloka bevava an-tserasera izay mety hihoatra ny sisintany mihitsy moa hanenjehana ny mpandika lalàna an-tserasera.
Mikaroka ny tetikady ahafahana mampihena ny loza mety hitatao avy amin'olona maningatsingana no ataon'ny firenena tandrefana. Mifanohitra amin'izany kosa ny ifantohan'ny Rosiana fa ny azy ny vaovao mety handrahona avy amin'ny olona ampiasain'ny firenena no ahiany ka miezaka izy ny hampivelatra fifanarahana iraisam-pirenena izay hanakanana firenena – fa tsy olona – eo amin'ny sehatry ny fiarovana fikarohana sy fanomezam-baovao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/02/24/5111/
 tetikady (doctrine) miaramila vaovao: http://news.kremlin.ru/ref_notes/461
 tatitra nataon'ny McAfee: http://news.cnet.com/8301-27080_3-10399141-245.html